अमेरिका जान चाहनेहरुका लागि ईडीभी चिट्ठा खुल्यो, कसरी भर्ने ? — Sanchar Kendra
अमेरिका जान चाहनेहरुका लागि ईडीभी चिट्ठा खुल्यो, कसरी भर्ने ?
काठमाडौं । अमेरिकाले सन् २०२३ का लागि ईडिभी चिट्ठा खुला भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाली समयअनुसार बुधबार बेलुका ९:४५ देखि डिभी चिट्ठा खुला भएको हो ।